Warshadda Sheetka Aluminiumka Anodized - Shiinaha Anodized Sheet Aluminium Soo -saarayaasha, Alaab -qeybiyeyaasha
Dahabka Cad ee Aluminiumka ah ee Caansan
Aluminiumka Anodized waa daxalka iyo abrasion u adkaysiga taasoo la micno ah inuusan baaba'ayn, jabayn, diirin, ama jabin. Anodizing waa hab loo isticmaalo in lagu kordhiyo dhumucda lakabka oksaydhka dabiiciga ah ee dusha qaybaha birta. Waxay kordhisaa daxalka iyo xirashada iska caabbinta, inta lagu gudajiro geedi socodka dusha aluminiumka anodized waxaa lagu rinjiyeyn karaa midabyo badan oo kala duwan.
Aluminium -ka anodized waxaa lagu abuuray hannaan elektiroonik ah kaas oo u oggolaanaya midabka inuu dhex galo daloolada aluminiumka, taasoo dhalisay isbeddel dhab ah oo ku dhaca midabka dusha birta. Aluminium -ka anodized -ka ah wuu ka adag yahay oo wuu u adkaysi badan yahay xoqidda iyo daxalka. Laser-ku-caddaan-cawl / cawl. Fadlan ogow: hal dhinac oo kaliya ayaa ah kan ugu horreeya oo la ilaaliyo maaskaro.
Aluminiumyada anodized-ka ah badankoodu waa midabbada labada dhinac waxayna noqon karaan rotary, jiidis dheeman, ama laser-ku xardhan. Xardhinta Laser -ku waxay soo saartaa summad cawlan oo cad. Aluminium anodized laguma talinayo sublimation. Aluminiumkeena anodized ee midabaysan ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa codsiyada qurxinta mana ku habboon yahay isticmaalka bannaanka. Si kastaba ha ahaatee, aluminiumka anodized lacagteena satin waxaa loo isticmaali karaa bannaanka.
Naxaasta anodized ayaa goysay xaashida aluminiumka
Iyada oo ku saleysan kala -saaridda kor ku xusan ee aluminium aluminium, taarikada aluminiumka ayaa sidoo kale loo qaybin karaa noocyo badan. Mabda'a ugu horreeya ee muhiimka ah waa maaddada saxanka aluminium.
Xaashida aluminiumka anodized waa badeecad bir ah oo ka kooban aluminium oo ka samaysmay habsocodka dheef-shiid kiimikaad kaas oo ka bixiya dusha adag ee adag ee xidhashada adag. Lakabka difaaca ee ay samaysay habsocodka anodizing -ku dhab ahaantii waxyar buu ka badan yahay kor u qaadista lakabka oksaydhka dabiiciga ah ee si dabiici ah uga jira dusha aluminiumka